आज, धेरैजसो अविश्‍वास तिमीहरूभित्र नै रहिरहन्छ। तिमीहरूले आफैभित्र राम्ररी नियालेर हेर, र तिमीहरूले निश्चय नै जवाफ भेट्टाउनेछौ। जब तैंले वास्तविक जवाफ भेट्टाउँछस्, तब तैँले तँ परमेश्‍वरको विश्‍वासी होइनस्, बरु उहाँलाई छल गर्ने, निन्दा गर्ने र धोका दिने, र उहाँप्रति बफादार नरहने व्यक्ति होस् भनी स्वीकार गर्नेछस्। त्यसपछि तैंले ख्रीष्ट मानिस हुनुहुन्न, परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी महसुस गर्नेछस्। जब त्यो दिन आउँछ, तैंले ख्रीष्टलाई सम्मान गर्नेछस्, तँ उहाँप्रति डराउँनेछस् र तैँले साँचो रूपले ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नेछस्। हालको समयमा, तिमीहरूका हृदयका तीस प्रतिशत भाग मात्र विश्‍वासले भरिएको छ, जबकि अरू सत्तरी प्रतिशत शङ्काले भरिएको छ। ख्रीष्टले गर्नुहुने र भन्नुहुने हरेक कुराबाट उहाँप्रतिको तिमीहरूका धारणा र रायहरू, अर्थात् उहाँमाथिको तिमीहरूको पूर्ण अविश्‍वासबाट पलाउने धारणा र रायहरू आउँछन्। तिमीहरूले स्वर्गमा हुनुहुने अदृष्य परमेश्‍वरको मात्र सराहना गर्छौ र डर मान्छौं, र पृथ्वीमा हुनुहुने जीवित ख्रीष्टको निम्ति कुनै आदर गर्दैनौ। के यो पनि तिमीहरूको अविश्‍वास होइन र? तिमीहरू विगतमा काम गर्नुहुने परमेश्‍वरको निम्ति मात्र लालायित हुन्छौ, तर आजको ख्रीष्टको सामना गर्दैनौ। यो सबै सदा तिमीहरूका हृदयमा मिसिएको “विश्‍वास” अर्थात् आजको ख्रीष्टमा भरोसा नगर्ने विश्‍वास हो। मैले कुनै पनि तरिकाले तिमीहरूलाई कमको ठानेको छैन, किनकि तिमीहरूभित्र अत्यन्तै धेरै अविश्‍वास छ, अशुद्ध भएका र विच्छेदन गरिनुपर्ने तिमीहरूका धेरै कुराहरू छन्। यी अशुद्धताहरू तिमीहरूसँग कुनै विश्‍वास नै छैन भन्‍ने कुराको संकेत हो; ती त तिमीहरूले ख्रीष्टलाई त्यागेको निशान हो र तिनले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको धोकेबाज भनी कलङ्क लगाउँछन्। तिनीहरू ख्रीष्टसम्‍बन्धी तिमीहरूको ज्ञानको निम्ति घुम्टो, ख्रीष्टद्वारा तिमीहरूलाई हासिल गरिने कार्यको लागि बाधा, ख्रीष्टसँगको तिमीहरूको अनुकूलताको लागि रोकावट, र ख्रीष्टले तिमीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने कुराका प्रमाण हुन्। तिमीहरूको जीवनका सम्पूर्ण भागहरूलाई जाँच गर्ने समय अहिले नै हो! त्यसो गरेमा, त्यसले तिमीहरूलाई कल्‍पना गर्न सकिने हरेक तरिकाले फाइदा पुर्‍याउनेछ!
अघिल्लो: परमेश्‍वर मानिसको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ
अर्को: १. कुन ठूलो: परमेश्‍वर कि बाइबल? परमेश्‍वर र बाइबलबीचको सम्‍बन्ध के हो?